“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ရင် တိုင်းပြည်က ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမှာပဲ” အဝေးရောက်ညွန့်ပေါင်း အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း | Akonthi
အဲဒီအထဲမှာတော့ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းလည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ကိုယ်စား လှယ် ၁၁ ဦးနဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့(National Coalition Government of The Union of Burma-NCGUB )အဖြစ် စင်ပြိုင်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဝေးရောက် ညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သလို ဆွေမျိုးတော်စပ်သူတွေကိုလည်း မတရားအ သင်း ဆက်သွယ်သူ အဖြစ်သတ် မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်သည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတော့ ဒေါက်တာ စိန်ဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့(National Coalition Government of The Union of Burma-NCGUB ) တရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၈ ရက်မှာ သူတို့ရဲ့ စင်ပြိုင်အစိုးရကို မတရားအသင်းသတ်မှထားရာမှ ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာစိန်ဝင်းဟာ ပြည်တော်ပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းနဲ့ ရှေ့အလားအလာတွေ၊ သူလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမယ့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပေါ် အကုန်သိသတင်းဌာနက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အန်ကယ် မြန်မာပြည် ပြန်လာတဲ့ဆီက စချင်ပါတယ်။ အန်ကယ်အနေနဲ့ မြန်မာ ပြည် ပြန်လာရတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။ ဘယ်လို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပြန်လာဖြစ်တာလဲဆို သိချင်ပါ တယ်။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဘာကြောင့် ပြန်လာလဲ၊ ဒီလောက်ကြာနေပြီ အပြင်ဘက်မှာ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ကြာ နေလဲ အပြင် ဘက်မှာ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတေါကတော့ ရှိတယ်။ (၁) အချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့် အပြင်ရောက်နေလဲ။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ၊ အပြင်ရောက်တဲ့ လူတိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ အကြေင်းတရားရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ NCGUB ဆိုတဲ့ အဝေး ရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့ဖို့အတွက်ဆိုပြီး အပြင်ရောက်လာတာ။ ဒီအဝေးရောက်အစိုးရကလည်း ဘာနဲ့ ဆက်စပ်လဲဆိုတော့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဆက်စပ်တယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း ဘာနဲ့ ဆက်စပ်လည်းဆိုတော့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်း သား၊ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ တွေနဲ့ ဆက်စပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်က ခင်ဗျားတို့ အေးအေး ဆေးဆေး နေကြပါ။ ကျုပ်တို့ ရွေးကော်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ကျုပ်တို့ စစ်တန်းလျားပြန်မယ်။ စစ်တန်း လျားပြန် ပြီးရင် အခြေခံ ဥပဒေကိုဆွဲဖို့ဆိုတာ ကျုပ်တို့တာဝန်မဟုတ်ဘူး။နိုင်တဲ့ ပါတီက ကမကထ လုပ်ပြီး ဆွဲပါလို့ ပြောတာ။ အဲဒါကို ဘယ်နှစ်ခု မှန်သလဲ။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ထွက်လာတာ။ မဟုတ်ရင် ထွက်စရာအကြောင်း မရှိဘူး။ အဲဒီတုန်းက ရွေး ကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ NLD ကို သူပြောတဲ့အတိုင်း အပ်လိုက်ရင် ပြဿနာမရှိဘူး။ ဒါ ကျွန် တော့အမြင်။ တကယ် လည်း အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန် တော် ယုံကြည်ခဲ့တာ။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အပြင်ထွက်လာလဲ၊ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အကြာကြီးနေလဲဆိုတော့ နောက်ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု မလာဘူးဗျ။ မလာဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်ပြီး နာမည်ယူထားတဲ့အစိုးရပဲ။ ပြည်သူလူထုက တင် မြှောက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ဘယ် လောက်ကြာ သွားလဲ။ အခုအချိန်မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲက ၂ ခုရှိသွားပြီ။ အချို့အ ပြောင်း အလဲတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်း ပြန်ကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အားရ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အပြောင်း အလဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် အပြောင်းအလဲတွေတော့ ရှိတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ကိုယ်စားလှယ်တော်အလုပ် လုပ်ရတယ်ဗျ။ ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်နေ လဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လို အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထားသလဲ။ ပြည်တွင်းက ဒီလောက် မပွင့်ဘူး။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာ ကလည်း သိချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ပြောချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန် တော်တို့က အစိုးရတင်မကဘူး။ ကိုယ်စားလှယ် လို ပြောတယ်။ အခုပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေဟာ ရှင်းရှင်း ပြောရင်တော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ အလုပ်မရှိတာလဲ ပါတယ်။ ၀င်မရှုပ်ချင်တာလည်းပါမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအချိန်ဒီအခါမှာ ဒါတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ် ကြည့်ပြီး အလုပ် လုပ်တာ။ အဲဒါကြောင့် မို့လို့ NCGUB ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ ဖျက်သိမ်းပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ပြန်တယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ် ပြန်ချင်တာ ပဲဗျ။ အတူးသဖြင့် နှစ်ပေါင်းဒီလောက်ကြာလာတော့ ရဲဘော်ရဲဖက်တွေနဲ့ တွေ့ချင်တယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်တွေနဲ့ တွေ့ ချင်တယ်။ တိုင်းပြည်ကိုလည်း ပြန်မြင်ချင်တယ်။ နောက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေးပေါ့နော်။ အရင် ဆုံးကတော့ အဲဒါ ဖြစ်ချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြိုးစားတယ်။ ပြန်လာတယ်။
မေး။ ။ ပြန်လာဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရော ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့လဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါက အခက်အခဲတင်မကဘူး။ ပုံစံတွေ ကျုပ်တို့ မကြိုက်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျ။ ဟုတ်ပြီ အခု တပ်ကလည်း အရွေ့နဲ့။ NLD ကလည်း အရွေ့နဲ့ ကျန်တဲ့ လူတွေကလည်း အရွေ့နဲ့ ညှိကြတဲ့အချိန် တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်မ လဲ။ အရင်တုန်းကဟာတွေတော့ ခင်ဗျားတို့ သိပ်မပြောကြနဲ့ဗျာ။ အဲဒီလို ဖြစ်ရမှာ။ သို့သော်လည်းပဲ ပြန်ကြည်လိုက်တဲ့ အခါကျ တော့ အပြင်ကလူတွေ ပြောတာတေါဆိုတာတွေ ကျွန်တော် နားထောင်လို့ ကြားတယ်။ အတွင်းကနေ မကြိုဆိုဘူးတဲ့။ လာ ကြ ပါ။ ခင်ဗျားတို့ အပြင်မှာ နှစ်ပေါင်း များစွာအကြာကြီးနေခဲ့တာ။ ခင်ဗျားတို့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။ ကျုပ်တို့အတူတွဲလုပ်ရ အောင်ဆိုတာမျိုး ကြိုဆိုတာ မရှိဘူး။ အသိအမှတ်မပြုတဲ့အဆင့်လောက်ရောက်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါမကောင်းဘူးဗျ။ ကျွန် တော့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်ဘက်က လုပ်တဲ့လူတွေကလည်း အပြင်ကိစ္စ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ အတွင်း မှာလည်း အတွင်း ကိစ္စ တွေပေါ့။ ဘာအတွက် လုပ်လဲ။ ဒီမိုကရေစီအတွက် လုပ်တာ။ တိုင်းပြည် ပြုပြင် ရေး အတွက် လုပ်တာ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ် တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဟဇာတမဖြစ်တာ မကောင်းဘူးဗျ။
ကျွန်တော် ပြန်ပြေမယ်။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာကို။ ဗီဇာတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ပြန်လာတဲ့ သူတွေက ဗမာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြား သား ခံယူထားတဲ့လူတွေကို အလည်အပတ်ဗီဇာနဲ့ ပြန်လာခွင့်ပြုတယ်။ ခင်ဗျား ဧည့်သည်ပဲ မြန်မာနိုင်သားမဟုတ်ဘူး။ ဒီအခွင့် ရေး ဒီအခွင့်ရေးတွေတော့ ရှိတယ်။ အိုခေ၊ ပြန်တဲ့သူကလည်း ပြန်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုရှယ်ဗီဇာကျတော့ ကြပ်ပီဗျ။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိတယ်။ ကျုပ်တို့လည်း သိတယ်။ ကြပ်ပြီ။ မလိုအပ်တာ တွေ လည်း အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီလို ကြပ်တာကို ကျွန်တော်က မကြိုက်ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေ လုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒါ မလုပ်ရဘူး။ လုပ်မှာမှ မဟုတ်တာ။ လုပ်ရင်လည်း မကျေနပ်ရင် ပြန်လွှတ်လိုက်ပေါ့။ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဘူး။ ပြန်သွားတဲ့ သူတွေက နိုင်ငံရေးသမားတွေ။ ရယ်ဖြူဂျီ သမားတွေ။ ဒီလူတွေက နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အဲဒီအခြေအနေရောက်တာ။ ရိုးရိုးတန်းတန်းဆို မရောက်ဘူး။
နိုင်ငံရေး လုပ်တဲ့ သူတွေ ပြန်သွားရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးဆိုတာကို လက်မှတ်ထိုးပါဆိုတော့ ကြိုက်ပါ့မလား။ ကျွန်တော်တို့က ပြောတာ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။ နောက်တစ်ခါ ဥပဒေတစ်ခု ထွက်လာရင် မျက်စိမှိတ်ချင်မှိတ်လို့ရ အောင် လို့ ဥပဒေတွေ ကလည်း တစ်မျိုးပဲ။ LA ကတစ်မျိုး၊ ဟိုကတစ်မျိုး ဒီကတစ်မျိုး။ သံရုံးတွေအနေနဲ့ ဒီလို မလုပ်ပါနဲ့ ။အခုခောတ်ကြီးမှာ ၀က်ဆိုဒ် ကနေ အတိအလင်း ကြေညာ။ ဒါမလိုတော့ဘူး၊ ဒါလိုတယ်။ ဒါကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါတွေလည်း ရင်ဆိုင်ရ တော့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေ ကြာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဗမာပြည် သားခံယူဖို့ ကိစ္စ ကျွန်တော်တို့ လုပ်တယ်။ ဗမာပြည်သား အသစ်ည်း မဟုတ်ဘူး။ အဟောင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့် အင်တာဗျူး ဖတ်ကြည့်။ မိုးမခမှာ။
ဗမာပြည်သားဟာ ဗမာပြည်သားပဲ။ အဲဒီမှာလည်း ကြာတာပဲ။ တစ်ခုခုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင် အထက်ကို တင်ရ မယ်ဆိုရင် အထက်က ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး။ ဘယ်တော့ ပြန်ပြီး အဖြေရမလဲဆိုတာလည်း မသိဘူး။ ဒါမျိုးမ ဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ။ အထူး သဖြင့်တော့ သံရုံးတွေဟာ ဗမာ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ပြည်ပမှာနေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ကူညီဖို့ သူတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဗျ။ အခုက ကူညီတာထက် ညှစ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီဟာမှာ အချိန်တွေ ကြာခဲ့တယ်။ အခုတော့ ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာ။ သူတို့က ဟိုဟာပြန်အပ် ဒီဟာပြန်အပ်။ ကမန်တော်တို့ မအပ်နိုင်ဘူး။
မေး။ ။ပြည်တွင်း ပြန်ရောက်တော့ရော ဘာတွေ လှုပ်ရှားနေလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသားခံယူဖို့ ကိစ္စကအစ ဘာတွေ လှုပ်ရှားနေလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ တစ်ဦးချင်းလှုပ်ရှားကြ။ ကျွန်တော်တော့ မပါဘူး။ ပါတော့ ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လှုပ် ရှားလဲ။ ဆန့်ကျင်လဲ။ ဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ မတရားတဲ့ အာဏာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံလို့မရဘူး။ ခုဏ က ပြောသလိုပေါ့၊ ဆိုရှယ်ဗီဇာမှာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးလို့ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းရင် ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်မထိုးနိုင်ဘူး။ သဘော က၊ သူတို့ ဗဇာပေးပေး မပေးပေးပေါ့ဗျာ။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ရမယ်ဗျ။ တစ်ယောက်တည်းတော့ လုပ်လို့မကောင်းဘူး။ အများက လုပ် ရမှာ။
မေး။ ။ လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအနေပေါ်မှာရာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ ပြည်ပမှာ ရောက်နေတုန်းကနဲ့ အခု ပြန်ရောက် လာပြီးမှ အခြေအနေတွေအပေါ် ဘယ်လို ရှုမြင်သုံးသပ်ချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျေနပ်စရာတော့ မရှိဘူးဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ကျေနပ်လားတော့ မသိဘူး။ နှေးတယ်လို့လည်း ခံစားရ တယ်။ မဟုတ်တဲ့ နေရာမြှ အလုပ်များနေတယ်လို့လည်း ခံစားရတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့ ကိစ္စဆိုရင်ပေါ့နော်။ ဒီလောက်ကြာဖို့ မလိုဘူးပေါ့နော်။ တစ်ချို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ လက်ရှိ NLD ကတော့ အရေးယူတယ်ဗျ။ အရေးယူတယ်။ အဂတိ ကိစ္စတွေ ဘာတွေမှာ အရေးယူတယ်။ လွတ်သွားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အကုန်လုံး အရေးယူတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တာဝန်က ဒါတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ဘူး။ တခြားဟာလည်း ထောက်ပြရမယ်။ ဒီပြင်ဟာ ထောက်ရမယ်ဆိုတာ ခုဖြစ်နေတာလည်း ထောက်ပြရမယ်။ အရင်တုန်းက ဟာလည်းထောက်ပြရမယ်။ NLD က ဒါတွေ ဒါတွေ အရေးယူခဲ့တယ်။ အဲဒါမျိုးက ဒီပြင် အစိုးရ အဆက်အဆက်မှာ ရှိသလား။ မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ မေးခွန်းမထုတ်ရင် ပြည်သူလူထု ဘယ်လိုလုပ် သိမလဲ။ ပြည် သူလူထု ဘယ်လုပ် မေးခွန်းထုတ်မလဲ။
အဲဒီတော့ ကမန်တော်က ပြောချင်တာကတော့ မျှတော့ မျှတရမယ်။ ဝေဖန်ပါ။ ဝေဖန်တဲ့အခါမှာ ၁ အချက် မျှတရမယ်။ ၂ အချက် တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေးရေး။ ခင်ဗျားတို့ အစိုးရလို့ ပြောတ တကယ့် အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ နာမည်ပဲ ရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်။ ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်ရင် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားမှာပဲ။ ပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပေါ့။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။ အဲဒီတော့ ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက်။ အဲဒီလိုပဲ။ ပြောစရာရှိရင် ပြောပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဆိုတာ ရေလိုမသုံးပါနဲ့။ ဒီအစိုးရမှာ ကာကွယ်ရေးကို ဘယ်သူကိုင်သလဲ။ ပြည်ထဲရေးကို ဘယ်သူကိုင်သလဲ။ ပြည်ထဲရေးမှာ ဘာပြဿနာတွေ တက်နေသလဲ။ ခင်ဗျားတို့ ထောက်ပြ ရမှာ။ အစိုးရ၊ ဒေါ်စု အစိုးရ၊ NLD အစိုးရ၊ NLD အစိုးရက ဘာလုပ်နေသလဲ။ ကျွန်တော် အဲဒါမျိုးတော့ မကြိုက်ဘူး။ မျှတရမယ်။ တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် ဖြစ်ရမယ်။ ပြောစရာရှိရင် ပြောရမယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရော တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား။
ဖြေ။ ။ အခုတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ နေနိုင်မယ်။ သွားရပြုရတာလည်း လွယ်မယ် အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ ပိုပြီးလွယ်မှာပေါ့ဗျာ။ အခုချက်ချင်းတော့ ကျွန်တော် မရှိဘူး။
မေး။ ။ နောက်တစ်ခုပေါ့။ အကယ်၍သာ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အဲဒီအချိန် အစိုးရက လက်ခံခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်လာမယ်လို့မြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ နှစ်အရကြည့်ရင် အဲဒီအချိန်ကသာ ပေးလိုက်ရင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် အခုဖြစ်နေပြီ။ ဒီ နှစ်ပေါင်း၃၀ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းဖြစ်နေပြီ။ အခုဟာက နှစ်ပေါင်း ၃၀ မဟုတ်ဘူး။ အခုမှ စပြီး ၅နှစ်လောက် ၁၀ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါ တောင်မှ အတိအကျမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၉၀ တုန်းက ကျွန်တော်တို့ စစ်တန်းလျား ပြန်ပါမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို မဆွဲပါဘူးပြောသွားတာ။ အခု ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက ပြဿနာကြီးတက်နေပြီ။ ဒါကို ပြင်ဖိုပလည်း လိုနေတယ်။ အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော် တို့ ယုံကြည်တယ်ဗျာ။ ယုံကြည်တာပဲ ပြောလို့ရတာပေါ့။ အများကြီးပြောင်းလဲ နိုင်တယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိမှာ လွှတ်တော်ထဲက တစ်ဆင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်း ရှိတာပေါ့နော်။ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးမျှော်မှန်းချက်ကရော မျှော်မှန်းသလောက် အဆင်ပြေပါ့မလား။ တစ်ဖက်မှာတပ်ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍကလည်းရှိနေသေးတော့။ အောင်မြင်နိုင်မယ့် အလားအလာမြင်ရလား။
ဖြေ။ ။ ချက်ချင်းတော့ ဘယ်အောင်မြင်မလည်းဗျာ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်သင့် လုပ်တိုက်တာကို အခု လုပ်ဖို့တယ်။ ပြည်သူလူထုတွေ လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ပါ။ ကိုယ်က လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ သို့သော်လည်း ပြည် သူ လူထုကလည်း ကျုပ်တို့ ဒါကို မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ပြောရမယ်။ မပြောဘူး၊ NLDပဲ ပြောမယ်။ မီဒီယာပဲ ပြောမယ်။ ဟိုလူပြောမယ် ဒီလူပြောမယ်ဆိုရင် သူတို့က ပြောလာမှာ ပြည်သူလူထုက ဘာမှ မပြောဘူး။ ခင်ဗျားတို့ချည်းပြောနေတာ။ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကလည်း ကျုပ်တိုပ မကြိုက်ဘူး။ ပြင်ချင်တယ်။ ဒါကျုပ်တို့ ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောရမယ်။ ပြင်လို့ရတာမရတာက နောက်မှ ။ ဒါကို ပြောရမယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်က ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ ပါဝင်နေတာဆိုတော့ ဒီအ ပေါ်မှာလည်း သုံးသပ်ပေးပါဦး။ တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကနေ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသင့်ပြီလား။
ဖြေ။ ။ အဲဒါက ခက်တယ်ဗျ။ ခက်တယ်ဆိုတာက ဗမာပြည် နိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်းပေါ့။ တပ်မတော်က အာဏာကို သိမ်း လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ၁၉၆၂ ကမန်တော်တို့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအရွယ်ပေါ့။ ၁၉၆၂ မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက အာဏာ သိမ်း လိုက်တာ။ အဲဒီကတည်းက သိမ်းလိုက်တာ။ ဘာကြောင့် သိမ်းလိုက်တယ် ဆိုတာကို ပြောဖို့က နိုင်းပြည်မာ ကွဲပြားမှာကြောက် လို့တဲ့။ တိုင်းပြည်ကြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မှာကြောက်လို့။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြေင့် တပ်မ တော်က ထိန်းသိမ်းလိုက်ရပါတယ်တဲ့။ အိုခေ။ ထိန်းသိမ်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကျတော့ တပ်မတော် ထိန်းသိမ်းပြီးမှ လက်နက် ကိုင်တွေက ပိုများ လာတယ်။ တပ်မတော် မထန်းသိမ်းခင်က လက်နက်ကိုင်က ကရင်တို့ ကွန်မြူနစ်တို့လောက်ပဲ ရှိတာ။ ကချင် က နောက်မှ ၀င်လာတာ။ တပ်မတော်ထိန်းသိမ်းလိုက်တာနဲ့ ပိုများလာတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ။ ၂ အချက် ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ထိုးကျသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှိတုန်းက ဒီနောက်လူတွေ သိချင်မှ သိမယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ထိပ်မှာ ရှိတယ်။ ထိပ်မှာဆိုတာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ပြောတဲ့ အောကာင်းပြချက်နဲ့ တကယ်ဖြစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့က ကိုက်သလား။ ဒါ ပထမဆုံးပြောတာ။
နောက်ပိုင်းကျတော့ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ လက်နက်ကိုင်တွေ များတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်မယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခါ ကွဲဦးမယ်။ မကွဲအောင် သူတို့ရှိရမယ်တဲ့ တစ်ခါ လုပ်ပြန်ရော။ ထားလိုက်တော့ ၊ တပ်မတော် လအစိုးအစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍ ။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ တိုင်းပြည်က ဒီတိုင်းလ သွားလို့တော့ မကောင်းဘူး။ အဒြီတော့ ငြိမ်း ချမ်းရေးက အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတော့ဘာလဲ။ နှစ်ဖက် တိုက်တဲ့အပေါ်မှာတည်တာ။ ဟုတ် တယ်။ NLDကလည်းပြောနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ကလည်း အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကို လက်တွေ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ် လုပ်ရ လမယ့်လူ က ဘယ်သူလဲဆိုတော့ နှစ်ဖက် တိုက်တဲ့လူ။ တပ်မတော်နဲ့ လက်နက်ိုင်တွေ။ ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာ ရှိတုန်းက မာနယ်ပလောမှာ ကျွန်တော်တို့နေတယ်။ ပထမဦးစွာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကရင်နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိ တယ်။ မွန်နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတယ်။ ကချင်နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ တိုက်တာတိုက်။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ သဘောနဲ့။ သဘောတရားအရ မကျေနပ်လို့ တိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့လို့ ဗမာပြည်ရဲ့ ရှေ့ရေးကို ခင် ဗျားတို့ စဉ်းစားပါ။ အဲဒီမှာ ကမန်တော်တို့က ပရိုပို့စ်လုပ်တာက ဖက်ဒရယ် စစ်စဆန်။ ပြည်ထောင်စု စစ်စတန်။ ခွဲထွက်တာကို ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူး။ ခွဲလည်းမထံက်သင့်ဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ တွန်းခဲ့တယ်။ သက်သေတွေ အများကြီးရှီတယ်။ ဆို တော့ ဒီနှစ်ဖက်က တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် စကားပြောရတော့မယ့် အခြေအနေရှိတယ်။ မပြောဘူး၊ ဟိုရှောင်မယ် ဒီရှောင် မယ် ဆိုရင်တော့ အရစ်ရှည် သွားမှာပဲ။
မေး။ ။ အန်ကယ့် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ရစေချင်ပြီဆိုတာ။ လက်ရှိမှာရော မြန်မာပြည်က ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့နီးပြီလား။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရောင်နီသန်းပြီလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်က သန်းတယ်လို့ မမြင်ဘူးဗျ။ AA ပေါ်လာတာကြည့်ပါလား။ ငြိမ်းချမ်းရေးက မသန်းဘူး။ စကား ပြောရ မယ်။ လက်နက်ါကိုင်တဲ့ သူအချင်းချင်း စကားပြောရမယ်။ မင်းက ဒီလိုကွာ၊ ငါကဒီလိုကွာ။ ခင် ဗျားတို့ကတော့ စစ်သားစု ဆောင်း နေတာပဲ။ ကျုပ်တို့က ဘာလို့မစုရမှာလဲ။ အေး … မင်းတို့လည်း စုဆောင်း ငါတို့လည်း စုဆောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ ရှေ့ရေး ကျရင် ဘယ်လို လုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လုပ်ရမှာ။ တပ်မတော်က အင်အားအရှိဆုံး လက်နက် ကိုင် တာ။ သူက အလျှော့ပေးညှိနှိုင်းရမယ်။ သူက ပြော ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော် ကိုယ်တိုင်က ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်ရင်တော့ ကျန်တဲ့ လူက လိုက်မှာ မဟုတ် ဘူးဗျ။ လက်နက်ကိုင်တွေကိုး။ လက်နက်ကိုင်မှာပဲ။ တပ်မတော်က မင်းတို့က ဘာလုပ် သင့် တယ်။ ညာလုပ် သင့်တယ်ပြောပြီး သူလုပ်သင့်တာကျ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လက်ခံမလဲ။
မေ။ ။ လက်ရှိသွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးပွဲ စကားဝိုင်းတွေကရော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘယ်လောက် အတိုင်း အတာအထိ ထိရောက်မယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရမလဲ။
ဖြေ။ ။ လုံးဝ မထိရောက်ဘူးလို့တော့ မပြောချင်ဘူး။ တစ်ချို့တွေ ပြောတယ်။ သေနတ်ဖောက်တာထက် စာရင် ဆွေးနွေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ လက်နက်ကိုင်တဲ့ ဂရု ၂ခုက ကျွန်တော်တို့လို မဟုတ်ဘူးဗျ။ လက်နက်မကိုင်တဲ့ လူတွေလို မဟုတ်ဘူးဗျ။
မေး။ ။ ကြာဦးမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဖြေ။ ။ ကြာတော့ ကြာနိုင်တယ်။ ကြာနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ကြာတာက ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီကြားထဲမှာ ပြဿ နာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
မေး။ ။ အန်ကယ့်အနေနဲ့ရော နိုင်ငံရေးလောကထဲ ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလား။
ဖြေ။ ။ တိုက်ရိုက်ကြီး ပါတီထောင်တာတို့၊ ဒီပြင်ပါတီထဲ ၀င်တာတို့ အဲဒါမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရသူ တွေလည်း သူတို့ဟာသူတို့ လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ လျှောက်သွားနေမှာပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေးသမား ကိုယ့်အဖော်တွေနဲ့လည်း တွေ့မှာပေါ့။ ပါးစပ်ကလည်း လျှောက်ပြောမှာပေါ့ဗျာ။ အကြံပေးမယ်ပေါ့ဗျာ။ ယူချင်ယူ မယူချင်နေပေါ့။ နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူး။ လူမှုရေးတွေ ၊ဒါတွေလည်း လုပ်ချင်တာပေါ့။
မေး။ ။ ပါတီနိုင်င့ရေးအပေါ်မှာ စိတ်ကုန်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရမလား။
ဖြေ။ ။ စိတ်တော့ မကုန်ဘူး။ ကျုပ်က ဝေးနေတယ်ဗျ။ ခုမှ ၀င်မယ်ဆို မ၀င်နဲ့ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နောက်ဆယ်နှစ်စောင့်ဦး၊ နောက်ဆယ်နှစ်ဆို ကျုပ်က ခု ၇၅ နှစ်ကနေ ၈၅ နှစ်ဖြစ်ပြီ။ သဘောပြောပြတာပါ။
မေး။ ။ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပါတီတွေကို ဘာတွေ အကြံပေး ချင်တာ ရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ ၂၀၂၀ ကတော့ သူ့တို့ဟာ သူတို့ လုပ်သွားမှာပဲဗျ။ ပြည်သူလူထုကတော့ သေချာ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူလူထုလည်း စဉ်းစားတတ်တာပဲ။ ဘယ်ပါတီကို ထည့်ရမယ်၊ ရှေ့ရေးက ဘယ်လို ရှိသလဲ။ ဒီရှေ့ရေးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘယ်သူတွေ လိုသလဲ။ ပြည်သူလူထုက ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ ပါတီတွေကတော့ သိပ်သိပ်သည်းသည်းရှိဖို့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ စေတ နာရှိဖို့ ၊နောက်ပြီးတော့ လေ့လာမှုတွေကတော့ လို တယ်ဗျာ။ မလေ့လာရင် မလေ့လာတဲ့အဆင့်မှာပဲ ကျန်ခဲ့မှာ။
မေး။ ။ ၂၀၂၀ မှာ NLD ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုရော ဘယ်လို မြင်လဲ။ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆို ၂၀၁၅ တုန်းကလို အနိုင်ရနိုင် ဦးမ လား။ သူတို့အပေါ် အမြင်မကြည်ကြတာတွေလည်း ရှိနေတော့။
ဖြေ။ ။ အဲဒါ ဆိုးတယ်ဗျ။ ကျုပ်က ပြောလိုက်ရင် NLD ကို ပင်းတယ်လို့ ဖြစ်ဦးမယ်။ ပြောရတာ ခက်တယ်ဗျ။ တကယ်ပြော ရင် တော့။ ပြဿနာအကြီးကြီးက ရှိနေတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဘယ်ပါတီမဆို ကန့်လန့်ကြီးတော့ ဖြစ်နေမှာပဲ။ အဲ ဒါကို မပြင်မချင်း ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်မှာပဲ။ NLD တက်လည်း ဆက်ပြီး ကန့် လန့် ဖြစ်ဦးမှာပဲ။ NLD မတက်လို့ ဘယ်ပါတီ တက် တက် ကန့်လန့်ဖြစ်မှာပဲ။ ဘယ်လောက်ကန့်လန့်ဖြစ်မလဲ၊ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လောက် အင်အားရှိမလဲ။ အင်အားကို အင်အားနဲ့ ပြိုင်ရတာဗျ။ ရှင်းရှင်း ပြော ရင် နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ ပြိုင်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ NLD ရဲ့ အခြေခံ အင်အား ဘယ် လောက်ရှိလဲ။ ဒီဟာတွေကို စောင့်ပြီး ကြည့်ရမှာပဲ။
မေး။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖြည့်စွက်ပြီး ပြောချင်တာ ရှိသေးရင်လည်း ပြောပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ မရှိပါဘူးကွာ။ ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ လူတွေဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ မှန်မှန်ကန်ကန် မရှိရင် မလွယ်ဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကောင်းစားဖို့တော့ ကြည့်ရမှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ပါ .. အခုလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ကို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အန်ကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. ။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ - မျိုးသူအောင်ငြိမ်း
“၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံကို မပွငျရငျ တိုငျးပွညျက ဒီအတိုငျး ဆကျသှားမှာပဲ”
အဝေးရောကျညှနျ့ပေါငျး အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဒေါကျတာစိနျဝငျးနှငျ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခွငျး
၁၉၉၀ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျအပျေါ အဲဒီအခြိနျ တပျမတျော အစိုးရရဲ့ အသိအမှတျမပွုခဲ့တဲ့အတှကျ တိုငျးပွညျရဲ့ အခွအေနဟော ဆိုးရှားတဲ့ အခွကေို ရောကျသှားခဲ့ရတာ အားလုံး လကျခံထားရမယျ့ အရာပါ။ ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျကို အသိအမှတျပွုပွီး အာ ဏာလှဲပေးပါ့မယျဆိုတဲ့ ကတိကဝတျ ပွောငျပွငျေတငျးတငျး ခြိုးဖောကျခဲ့တဲ့နောကျမှာတော့ ၉၀ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရ အခြို့ ဟာ မွနျမာပွညျ ဒီမိုကရစေီ ခရီးကွမျးကို တိုကျပှဲဝငျဖို့ ပွညျပကို ထှကျခှာခဲ့တဲ့လမျးကို ရှေးခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီအထဲမှာတော့ ပဲခူးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပွညျခရိုငျ၊ ပေါကျခေါငျးမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာ စိနျဝငျးလညျး တဈယောကျအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျတာစိနျဝငျးပါတယျ။ ၁၉၉၁ ခုနှဈမှာ ၁၉၉၀ ခုနှဈ၊ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရ ကိုယျစား လှယျ ၁၁ ဦးနဲ့ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့(National Coalition Government of The Union of Burma-NCGUB )အဖွဈ စငျပွိုငျအစိုးရကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဝနျကွီးခြုပျရာထူးဖွငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဒီအဝေးရောကျ ညှနျပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့ကို စဈအစိုးရက အကွမျးဖကျအဖှဲ့အဖွဈ သတျမှတျခဲ့သလို ဆှမြေိုးတျောစပျသူတှကေိုလညျး မတရားအ သငျး ဆကျသှယျသူ အဖွဈသတျ မှတျခဲ့ပါတယျ။
အစိုးရအပွောငျးအလဲဖွဈသညျ့ သမ်မတ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရ လကျထကျ ၂၀၁၂ ခုနှဈမှာတော့ ဒေါကျတာ စိနျဝငျး ဦးဆောငျတဲ့ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားညှနျ့ပေါငျးအစိုးရအဖှဲ့(National Coalition Government of The Union of Burma-NCGUB ) တရားဝငျ ဖကျြသိမျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဇှနျ ၈ ရကျမှာ သူတို့ရဲ့ စငျပွိုငျအစိုးရကို မတရားအသငျးသတျမှထားရာမှ ဖကျြသိမျးပေးခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဒေါကျတာစိနျဝငျးဟာ ပွညျတျောပွနျလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ လကျရှိ မွနျမာ့ နိုငျငံရေး အခငျးအကငျြးနဲ့ ရှအေ့လားအလာတှေ၊ သူလှုပျရှားဆောငျရှကျသှားမယျ့ နိုငျငံရေးလှုပျရှားဆောငျရှကျမှုအခွအေနတှေအေပျေါ အကုနျသိသတငျးဌာနက တှဆေုံ့ မေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
မေး။ ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ အနျကယျ မွနျမာပွညျ ပွနျလာတဲ့ဆီက စခငျြပါတယျ။ အနျကယျအနနေဲ့ မွနျမာ ပွညျ ပွနျလာရတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြက ဘာဖွဈမလဲ။ ဘယျလို မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ ပွနျလာဖွဈတာလဲဆို သိခငျြပါ တယျ။
ဖွေ။ ။ ဟုတျကဲ့။ ဘာကွောငျ့ ပွနျလာလဲ၊ ဒီလောကျကွာနပွေီ အပွငျဘကျမှာ။ ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလောကျကွာ နလေဲ အပွငျ ဘကျမှာ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတေါကတော့ ရှိတယျ။ (၁) အခကျြကတော့ ကြှနျတျောတို့ ဘာ့ကွောငျ့ အပွငျရောကျနလေဲ။ လူတိုငျး လူတိုငျးမှာ ၊ အပွငျရောကျတဲ့ လူတိုငျးမှာတော့ သူ့ရဲ့ အကွငျေးတရားရှိတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ NCGUB ဆိုတဲ့ အဝေး ရောကျ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရ ဖှဲ့ဖို့အတှကျဆိုပွီး အပွငျရောကျလာတာ။ ဒီအဝေးရောကျအစိုးရကလညျး ဘာနဲ့ ဆကျစပျလဲဆိုတော့ ၁၉၉၀ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ဆကျစပျတယျ။ ၁၉၉၀ ရှေးကောကျပှဲကလညျး ဘာနဲ့ ဆကျစပျလညျးဆိုတော့ ရှဈဆယျ့ရှဈ ကြောငျး သား၊ ပွညျသူလူထုတှရေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲ တှနေဲ့ ဆကျစပျတယျ။ အဲဒီအခြိနျပဲ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စောမောငျက ခငျဗြားတို့ အေးအေး ဆေးဆေး နကွေပါ။ ကြုပျတို့ ရှေးကျောပှဲ လုပျပေးမယျ။ ရှေးကောကျပှဲပွီးရငျ ကြုပျတို့ စဈတနျးလြားပွနျမယျ။ စဈတနျး လြားပွနျ ပွီးရငျ အခွခေံ ဥပဒကေိုဆှဲဖို့ဆိုတာ ကြုပျတို့တာဝနျမဟုတျဘူး။နိုငျတဲ့ ပါတီက ကမကထ လုပျပွီး ဆှဲပါလို့ ပွောတာ။ အဲဒါကို ဘယျနှဈခု မှနျသလဲ။
အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့က ထှကျလာတာ။ မဟုတျရငျ ထှကျစရာအကွောငျး မရှိဘူး။ အဲဒီတုနျးက ရှေး ကောကျပှဲနိုငျတဲ့ NLD ကို သူပွောတဲ့အတိုငျး အပျလိုကျရငျ ပွဿနာမရှိဘူး။ ဒါ ကြှနျ တော့အမွငျ။ တကယျ လညျး အဲဒီအတိုငျး ဖွဈလာမယျလို့ ကြှနျ တျော ယုံကွညျခဲ့တာ။ ဘာကွောငျ့ ကြှနျတျော တို့ အပွငျထှကျလာလဲ၊ ဘာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အကွာကွီးနလေဲဆိုတော့ နောကျရှေးကောကျပှဲ တဈခု မလာဘူးဗြ။ မလာဘဲနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဆကျပွီး နာမညျယူထားတဲ့အစိုးရပဲ။ ပွညျသူလူထုက တငျ မွှောကျတာ မဟုတျဘူး။ အဲဒါ ဘယျ လောကျကွာ သှားလဲ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ရှေးကောကျပှဲက ၂ ခုရှိသှားပွီ။ အခြို့အ ပွောငျး အလဲတှရှေိတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရဲဘျောရဲဘကျတှလေညျး ပွနျကွတယျပေါ့။ ကြှနျတျောတို့ အားရ ကနြေပျလောကျတဲ့ အပွောငျး အလဲတော့ မဟုတျဘူး။ သို့သျော အပွောငျးအလဲတှတေော့ ရှိတယျ။
နောကျပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့က ဟိုတဈခြိနျတုနျးက ကိုယျစားလှယျတျောအလုပျ လုပျရတယျဗြ။ ပွညျတှငျးမှာ ဘာတှဖွေဈနေ လဲ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ဘယျလို အကယျြခြုပျနဲ့ ထားသလဲ။ ပွညျတှငျးက ဒီလောကျ မပှငျ့ဘူး။ အဲဒီတော့ နိုငျငံတကာ ကလညျး သိခငျြတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကလညျး ပွောခငျြတယျ။ အဲဒီတော့ ကြှနျ တျောတို့က အစိုးရတငျမကဘူး။ ကိုယျစားလှယျ လို ပွောတယျ။ အခုပှငျ့သှားတဲ့အခြိနျမှာ ဒါတှဟော ရှငျးရှငျး ပွောရငျတော့ အလုပျမဖွဈဘူးပေါ့ဗြာ။ အဲဒီတော့ အလုပျမရှိတာလဲ ပါတယျ။ ဝငျမရှုပျခငျြတာလညျးပါမယျပေါ့။ ကြှနျတျောတို့ ဒီအခြိနျဒီအခါမှာ ဒါတှေ လိုအပျတယျဆိုတဲ့အပျေါ ကွညျ့ပွီး အလုပျ လုပျတာ။ အဲဒါကွောငျ့ မို့လို့ NCGUB ကို ဖကျြသိမျးလိုကျတယျ။ ဖကျြသိမျးပွီးရငျ ကြှနျတျောတို့ ပွနျတယျ။ ကိုယျ့တိုငျးပွညျကိုယျ ပွနျခငျြတာ ပဲဗြ။ အတူးသဖွငျ့ နှဈပေါငျးဒီလောကျကွာလာတော့ ရဲဘျောရဲဖကျတှနေဲ့ တှခေ့ငျြတယျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြတှနေဲ့ တှေ့ ခငျြတယျ။ တိုငျးပွညျကိုလညျး ပွနျမွငျခငျြတယျ။ နောကျဘာလုပျမလဲဆိုတာကတော့ နောငျခါလာ နောငျခါဈေးပေါ့နျော။ အရငျ ဆုံးကတော့ အဲဒါ ဖွဈခငျြတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကွိုးစားတယျ။ ပွနျလာတယျ။
မေး။ ။ ပွနျလာဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါမှာရော ဘယျလို အခကျအခဲတှေ ရှိခဲ့လဲ။
ဖွေ။ ။ အဲဒါက အခကျအခဲတငျမကဘူး။ ပုံစံတှေ ကြုပျတို့ မကွိုကျတာတှေ အမြားကွီးရှိတယျဗြ။ ဟုတျပွီ အခု တပျကလညျး အရှနေဲ့။ NLD ကလညျး အရှနေဲ့ ကနျြတဲ့ လူတှကေလညျး အရှနေဲ့ ညှိကွတဲ့အခြိနျ တိုငျးပွညျကောငျးအောငျ ဘယျလို လုပျမ လဲ။ အရငျတုနျးကဟာတှတေော့ ခငျဗြားတို့ သိပျမပွောကွနဲ့ဗြာ။ အဲဒီလို ဖွဈရမှာ။ သို့သျောလညျးပဲ ပွနျကွညျလိုကျတဲ့ အခါကြ တော့ အပွငျကလူတှေ ပွောတာတေါဆိုတာတှေ ကြှနျတျော နားထောငျလို့ ကွားတယျ။ အတှငျးကနေ မကွိုဆိုဘူးတဲ့။ လာ ကွ ပါ။ ခငျဗြားတို့ အပွငျမှာ နှဈပေါငျး မြားစှာအကွာကွီးနခေဲ့တာ။ ခငျဗြားတို့ အတှအေ့ကွုံတှရှေိတယျ။ ကြုပျတို့အတူတှဲလုပျရ အောငျဆိုတာမြိုး ကွိုဆိုတာ မရှိဘူး။ အသိအမှတျမပွုတဲ့အဆငျ့လောကျရောကျနတေယျလို့ ပွောတယျ။ ဒါမကောငျးဘူးဗြ။ ကြှနျ တေျာ့အတှကျ မဟုတျပါဘူး။ အပွငျဘကျက လုပျတဲ့လူတှကေလညျး အပွငျကိစ်စ လုပျခဲ့တာပဲ။ အတှငျး မှာလညျး အတှငျး ကိစ်စ တှပေေါ့။ ဘာအတှကျ လုပျလဲ။ ဒီမိုကရစေီအတှကျ လုပျတာ။ တိုငျးပွညျ ပွုပွငျ ရေး အတှကျ လုပျတာ။ ကိုယျကြိုးအတှကျ လုပျ တာမဟုတျဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလို တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သဟဇာတမဖွဈတာ မကောငျးဘူးဗြ။
ကြှနျတျော ပွနျပွမေယျ။ ဘာဖွဈသလဲဆိုတာကို။ ဗီဇာတှေ ပုံစံအမြိုးမြိုးရှိတယျ။ ပွနျလာတဲ့ သူတှကေ ဗမာပဲ။ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံခွား သား ခံယူထားတဲ့လူတှကေို အလညျအပတျဗီဇာနဲ့ ပွနျလာခှငျ့ပွုတယျ။ ခငျဗြား ဧညျ့သညျပဲ မွနျမာနိုငျသားမဟုတျဘူး။ ဒီအခှငျ့ ရေး ဒီအခှငျ့ရေးတှတေော့ ရှိတယျ။ အိုခေ၊ ပွနျတဲ့သူကလညျး ပွနျ။ ဒါပမေဲ့ ဆိုရှယျဗီဇာကတြော့ ကွပျပီဗြ။ ခငျဗြားတို့လညျး သိတယျ။ ကြုပျတို့လညျး သိတယျ။ ကွပျပွီ။ မလိုအပျတာ တှေ လညျး အမြားကွီးရှိတယျ။ အဲဒီလို ကွပျတာကို ကြှနျတျောက မကွိုကျဘူး။ ဟုတျပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ဟာတှေ လုပျပါ။ ဒါပမေဲ့ မလိုအပျဘဲနဲ့ ခငျဗြားတို့ ဒါ မလုပျရဘူး။ လုပျမှာမှ မဟုတျတာ။ လုပျရငျလညျး မကနြေပျရငျ ပွနျလှတျလိုကျပေါ့။ နိုငျငံရေး မလုပျရဘူး။ ပွနျသှားတဲ့ သူတှကေ နိုငျငံရေးသမားတှေ။ ရယျဖွူဂြီ သမားတှေ။ ဒီလူတှကေ နိုငျငံရေးလုပျလို့ အဲဒီအခွအေနရေောကျတာ။ ရိုးရိုးတနျးတနျးဆို မရောကျဘူး။
နိုငျငံရေး လုပျတဲ့ သူတှေ ပွနျသှားရငျ နိုငျငံရေးမလုပျပါဘူးဆိုတာကို လကျမှတျထိုးပါဆိုတော့ ကွိုကျပါ့မလား။ ကြှနျတျောတို့က ပွောတာ ခငျဗြားတို့ အဲဒီလိုမလုပျပါနဲ့။ နောကျတဈခါ ဥပဒတေဈခု ထှကျလာရငျ မကျြစိမှိတျခငျြမှိတျလို့ရ အောငျ လို့ ဥပဒတှေေ ကလညျး တဈမြိုးပဲ။ LA ကတဈမြိုး၊ ဟိုကတဈမြိုး ဒီကတဈမြိုး။ သံရုံးတှအေနနေဲ့ ဒီလို မလုပျပါနဲ့ ။အခုခောတျကွီးမှာ ဝကျဆိုဒျ ကနေ အတိအလငျး ကွညော။ ဒါမလိုတော့ဘူး၊ ဒါလိုတယျ။ ဒါကို ဖကျြပဈလိုကျပွီ။ ကြှနျတျောတို့ အဲဒါတှလေညျး ရငျဆိုငျရ တော့ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျတှေ ကွာတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ ဗမာပွညျ သားခံယူဖို့ ကိစ်စ ကြှနျတျောတို့ လုပျတယျ။ ဗမာပွညျသား အသဈညျး မဟုတျဘူး။ အဟောငျးလညျး မဟုတျဘူး။ ကြှနျတေျာ့ အငျတာဗြူး ဖတျကွညျ့။ မိုးမခမှာ။
ဗမာပွညျသားဟာ ဗမာပွညျသားပဲ။ အဲဒီမှာလညျး ကွာတာပဲ။ တဈခုခုရေးလိုကျတယျဆိုရငျ အထကျကို တငျရ မယျဆိုရငျ အထကျက ဘာမှနျးလညျးမသိဘူး။ ဘယျတော့ ပွနျပွီး အဖွရေမလဲဆိုတာလညျး မသိဘူး။ ဒါမြိုးမ ဖွဈသငျ့ဘူးဗြာ။ အထူး သဖွငျ့တော့ သံရုံးတှဟော ဗမာ ပွညျသူပွညျသားတှကေို ပွညျပမှာနတေဲ့ ပွညျသူတှေ ကို ကူညီဖို့ သူတို့မှာ တာဝနျရှိတယျဗြ။ အခုက ကူညီတာထကျ ညှဈသလို ဖွဈနတေယျ။ အဲဒီဟာမှာ အခြိနျတှေ ကွာခဲ့တယျ။ အခုတော့ ပွီးသှားပွီပေါ့ဗြာ။ သူတို့က ဟိုဟာပွနျအပျ ဒီဟာပွနျအပျ။ ကမနျတျောတို့ မအပျနိုငျဘူး။
မေး။ ။ပွညျတှငျး ပွနျရောကျတော့ရော ဘာတှေ လှုပျရှားနလေဲ။ မွနျမာနိုငျငံသားခံယူဖို့ ကိစ်စကအစ ဘာတှေ လှုပျရှားနလေဲ။
ဖွေ။ ။ အဲဒါကတော့ တဈဦးခငျြးလှုပျရှားကွ။ ကြှနျတျောတော့ မပါဘူး။ ပါတော့ ပါတယျပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတျောတို့ ဘယျလို လှုပျ ရှားလဲ။ ဆနျ့ကငျြလဲ။ ဆနျ့ကငျြတယျလို့ပွောရမှာပေါ့ဗြာ။ မတရားတဲ့ အာဏာတှကေိုတော့ ကြှနျတျောတို့ လကျခံလို့မရဘူး။ ခုဏ က ပွောသလိုပေါ့၊ ဆိုရှယျဗီဇာမှာ နိုငျငံရေးမလုပျရဘူးလို့ လကျမှတျထိုးခိုငျးရငျ ကြှနျတျောတို့ လကျမှတျမထိုးနိုငျဘူး။ သဘော က၊ သူတို့ ဗဇာပေးပေး မပေးပေးပေါ့ဗြာ။ ဒါမြိုးတှေ လုပျရမယျဗြ။ တဈယောကျတညျးတော့ လုပျလို့မကောငျးဘူး။ အမြားက လုပျ ရမှာ။
မေး။ ။ လကျရှိ မွနျမာ့ နိုငျငံရေးအခွအေနအေနပေျေါမှာရာ ဘယျလိုမွငျလဲ။ ပွညျပမှာ ရောကျနတေုနျးကနဲ့ အခု ပွနျရောကျ လာပွီးမှ အခွအေနတှေအေပျေါ ဘယျလို ရှုမွငျသုံးသပျခငျြလဲ။
ဖွေ။ ။ ကနြေပျစရာတော့ မရှိဘူးဗြ။ ခငျဗြားတို့ ကနြေပျလားတော့ မသိဘူး။ နှေးတယျလို့လညျး ခံစားရ တယျ။ မဟုတျတဲ့ နရောမွှ အလုပျမြားနတေယျလို့လညျး ခံစားရတယျ။ ဥပမာ ကြှနျတော့ ကိစ်စဆိုရငျပေါ့နျော။ ဒီလောကျကွာဖို့ မလိုဘူးပေါ့နျော။ တဈခြို့ အလုပျလုပျတဲ့ နရောမှာ လကျရှိ NLD ကတော့ အရေးယူတယျဗြ။ အရေးယူတယျ။ အဂတိ ကိစ်စတှေ ဘာတှမှော အရေးယူတယျ။ လှတျသှားတာတှလေညျး ရှိတယျ။ အကုနျလုံး အရေးယူတာ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့လို့ ခငျဗြားတို့ရဲ့ တာဝနျက ဒါတဈခုတညျးတငျ မဟုတျဘူး။ တခွားဟာလညျး ထောကျပွရမယျ။ ဒီပွငျဟာ ထောကျရမယျဆိုတာ ခုဖွဈနတောလညျး ထောကျပွရမယျ။ အရငျတုနျးက ဟာလညျးထောကျပွရမယျ။ NLD က ဒါတှေ ဒါတှေ အရေးယူခဲ့တယျ။ အဲဒါမြိုးက ဒီပွငျ အစိုးရ အဆကျအဆကျမှာ ရှိသလား။ မေးခှနျးထုတျရမယျ။ ခငျဗြားတို့ မေးခှနျးမထုတျရငျ ပွညျသူလူထု ဘယျလိုလုပျ သိမလဲ။ ပွညျ သူလူထု ဘယျလုပျ မေးခှနျးထုတျမလဲ။
အဲဒီတော့ ကမနျတျောက ပွောခငျြတာကတော့ မြှတော့ မြှတရမယျ။ ဝဖေနျပါ။ ဝဖေနျတဲ့အခါမှာ ၁ အခကျြ မြှတရမယျ။ ၂ အခကျြ တိုငျးပွညျရဲ့ ရှေးရေး။ ခငျဗြားတို့ အစိုးရလို့ ပွောတ တကယျ့ အစိုးရမဟုတျဘူး။ နာမညျပဲ ရှိတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကွေောငျ့။ ဒီ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ မပွငျရငျ ဒီအတိုငျးပဲ ဆကျသှားမှာပဲ။ ပွငျနိုငျအောငျကွိုးစားဖို့ပေါ့။ ဒါကတော့ ဘယျလိုကွိုးစားကွမလဲ ဘယျလိုလုပျကွမလဲကတော့ တဈပိုငျးပေါ့။ အဲဒီတော့ ရှသေမငျ ဘယျကထှကျ မငျးကွီးတာကထှကျ။ အဲဒီလိုပဲ။ ပွောစရာရှိရငျ ပွောပါ။ ဒါပမေဲ့ အစိုးရဆိုတာ ရလေိုမသုံးပါနဲ့။ ဒီအစိုးရမှာ ကာကှယျရေးကို ဘယျသူကိုငျသလဲ။ ပွညျထဲရေးကို ဘယျသူကိုငျသလဲ။ ပွညျထဲရေးမှာ ဘာပွဿနာတှေ တကျနသေလဲ။ ခငျဗြားတို့ ထောကျပွ ရမှာ။ အစိုးရ၊ ဒျေါစု အစိုးရ၊ NLD အစိုးရ၊ NLD အစိုးရက ဘာလုပျနသေလဲ။ ကြှနျတျော အဲဒါမြိုးတော့ မကွိုကျဘူး။ မြှတရမယျ။ တိုငျးပွညျ အကြိုးအတှကျ ဖွဈရမယျ။ ပွောစရာရှိရငျ ပွောရမယျ။
မေး။ ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ရော တှဖေို့အစီအစဉျရှိလား။
ဖွေ။ ။ အခုတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျရှိမှာပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတျောလညျး ဒီမှာ နနေိုငျမယျ။ သှားရပွုရတာလညျး လှယျမယျ အဲဒီလိုဆိုရငျတော့ ပိုပွီးလှယျမှာပေါ့ဗြာ။ အခုခကျြခငျြးတော့ ကြှနျတျော မရှိဘူး။
မေး။ ။ နောကျတဈခုပေါ့။ အကယျ၍သာ ၉၀ ရှေးကောကျပှဲရလဒျကို အဲဒီအခြိနျ အစိုးရက လကျခံခဲ့ရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွအေနဟော ဘယျလောကျထိ တိုးတကျလာမယျလို့မွငျလဲ။
ဖွေ။ ။ နှဈအရကွညျ့ရငျ အဲဒီအခြိနျကသာ ပေးလိုကျရငျ နှဈပေါငျး ၃၀ လောကျ အခုဖွဈနပွေီ။ ဒီ နှဈပေါငျး၃၀ ဒီမိုကရစေီ အကူးအပွောငျးဖွဈနပွေီ။ အခုဟာက နှဈပေါငျး ၃၀ မဟုတျဘူး။ အခုမှ စပွီး ၅နှဈလောကျ ၁၀ နှဈလောကျပဲ ရှိသေးတယျ။ ဒါ တောငျမှ အတိအကမြဟုတျဘူး။ ၁၉၉၀ တုနျးက ကြှနျတျောတို့ စဈတနျးလြား ပွနျပါမယျ။ ဖှဲ့စညျးပုံကို မဆှဲပါဘူးပွောသှားတာ။ အခု ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံက ပွဿနာကွီးတကျနပွေီ။ ဒါကို ပွငျဖိုပလညျး လိုနတေယျ။ အမြားကွီးပွောငျးလဲနိုငျတယျလို့ ကြှနျတျော တို့ ယုံကွညျတယျဗြာ။ ယုံကွညျတာပဲ ပွောလို့ရတာပေါ့။ အမြားကွီးပွောငျးလဲ နိုငျတယျ။
မေး။ ။ လကျရှိမှာ လှတျတျောထဲက တဈဆငျ့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ ပွငျဆငျနိုငျရေး ကွိုးပမျးနကွေတာလညျး ရှိတာပေါ့နျော။ သူတို့ရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ ပွငျဆငျရေးမြှျောမှနျးခကျြကရော မြှျောမှနျးသလောကျ အဆငျပွပေါ့မလား။ တဈဖကျမှာတပျရဲ့ အခနျး ကဏ်ဍကလညျးရှိနသေေးတော့။ အောငျမွငျနိုငျမယျ့ အလားအလာမွငျရလား။
ဖွေ။ ။ ခကျြခငျြးတော့ ဘယျအောငျမွငျမလညျးဗြာ။ ဒါပမေဲ့ လုပျသငျ့ လုပျတိုကျတာကို အခု လုပျဖို့တယျ။ ပွညျသူလူထုတှေ လညျး ဒီအတိုငျးပဲ။ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတာကို လုပျပါ။ ကိုယျက လုပျနိုငျမယျလို့တော့ ဖွဈခငျြမှ ဖွဈမယျ။ သို့သျောလညျး ပွညျ သူ လူထုကလညျး ကြုပျတို့ ဒါကို မကွိုကျဘူးဆိုတာကိုတော့ ပွောရမယျ။ မပွောဘူး၊ NLDပဲ ပွောမယျ။ မီဒီယာပဲ ပွောမယျ။ ဟိုလူပွောမယျ ဒီလူပွောမယျဆိုရငျ သူတို့က ပွောလာမှာ ပွညျသူလူထုက ဘာမှ မပွောဘူး။ ခငျဗြားတို့ခညျြးပွောနတော။ မဟုတျဘူး။ ပွညျသူလူထုကလညျး ကြုပျတိုပ မကွိုကျဘူး။ ပွငျခငျြတယျ။ ဒါကြုပျတို့ ဆန်ဒမဟုတျဘူးဆိုတာကို ပွောရမယျ။ ပွငျလို့ရတာမရတာက နောကျမှ ။ ဒါကို ပွောရမယျ။
မေး။ ။ လကျရှိ မွနျမာ့ နိုငျငံရေး အခနျးကဏ်ဍမှာ တပျမတျောက ရာခိုငျနှုနျးတျောတျောမြားမြား ပါဝငျနတောဆိုတော့ ဒီအ ပျေါမှာလညျး သုံးသပျပေးပါဦး။ တပျမတျောသညျ နိုငျငံရေးအခနျးကဏ်ဍကနေ ပွနျလညျ ဆုတျခှာသငျ့ပွီလား။
ဖွေ။ ။ အဲဒါက ခကျတယျဗြ။ ခကျတယျဆိုတာက ဗမာပွညျ နိုငျငံရေး သမိုငျးကွောငျးပေါ့။ တပျမတျောက အာဏာကို သိမျး လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ၁၉၆၂ ကမနျတျောတို့ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားအရှယျပေါ့။ ၁၉၆၂ မှာ ဗိုလျခြုပျနဝေငျးက အာဏာ သိမျး လိုကျတာ။ အဲဒီကတညျးက သိမျးလိုကျတာ။ ဘာကွောငျ့ သိမျးလိုကျတယျ ဆိုတာကို ပွောဖို့က နိုငျးပွညျမာ ကှဲပွားမှာကွောကျ လို့တဲ့။ တိုငျးပွညျကွီး တဈစိတျတဈပိုငျးဖွဈမှာကွောကျလို့။ အဲဒီအခြိနျမှာ ရှမျးနဲ့ ပတျသကျတာတှေ ရှိတယျ။ ဒါကွငျေ့ တပျမ တျောက ထိနျးသိမျးလိုကျရပါတယျတဲ့။ အိုခေ။ ထိနျးသိမျးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ လကျတှကေ့တြော့ တပျမတျော ထိနျးသိမျးပွီးမှ လကျနကျ ကိုငျတှကေ ပိုမြား လာတယျ။ တပျမတျော မထနျးသိမျးခငျက လကျနကျကိုငျက ကရငျတို့ ကှနျမွူနဈတို့လောကျပဲ ရှိတာ။ ကခငျြ က နောကျမှ ဝငျလာတာ။ တပျမတျောထိနျးသိမျးလိုကျတာနဲ့ ပိုမြားလာတယျ။ အဲဒါ ဘာကွောငျ့လဲ။ ၂ အခကျြ ၊ တိုငျးပွညျရဲ့ စီးပှားရေး ထိုးကသြှားတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ရှိတုနျးက ဒီနောကျလူတှေ သိခငျြမှ သိမယျ။ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးပွညျရဲ့ စီးပှားရေး ထိပျမှာ ရှိတယျ။ ထိပျမှာဆိုတာ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ သူတို့ပွောတဲ့ အောကာငျးပွခကျြနဲ့ တကယျဖွဈတဲ့ ပုံစံနဲ့က ကိုကျသလား။ ဒါ ပထမဆုံးပွောတာ။
နောကျပိုငျးကတြော့ ဘာဖွဈလာလဲဆိုတော့ လကျနကျကိုငျတှေ မြားတယျတဲ့။ တဈယောကျတဈပေါကျဖွဈမယျ။ တိုငျးပွညျတဈခါ ကှဲဦးမယျ။ မကှဲအောငျ သူတို့ရှိရမယျတဲ့ တဈခါ လုပျပွနျရော။ ထားလိုကျတော့ ၊ တပျမတျော လအစိုးအစိုးရနဲ့ တပျမတျောရဲ့ နိုငျငံရေးအခနျးကဏ်ဍ ။ အဲဒီတော့ ဘာလုပျကွမှာလဲ။ တိုငျးပွညျက ဒီတိုငျးလ သှားလို့တော့ မကောငျးဘူး။ အဒွီတော့ ငွိမျး ခမျြးရေးက အရေးကွီးတယျဆိုပွီးဖွဈလာတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေး ဆိုတော့ဘာလဲ။ နှဈဖကျ တိုကျတဲ့အပျေါမှာတညျတာ။ ဟုတျ တယျ။ NLDကလညျးပွောနိုငျတယျ။ နိုငျငံတကာ ကလညျး အကွံဉာဏျပေးနိုငျတယျ။ ဒါကို လကျတှေ့ ဘယျလို ဖွရှေငျးမလဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ လုပျရ လမယျ့လူ က ဘယျသူလဲဆိုတော့ နှဈဖကျ တိုကျတဲ့လူ။ တပျမတျောနဲ့ လကျနကိုငျတှေ။ ကြှနျတျောတို့ အပွငျမှာ ရှိတုနျးက မာနယျပလောမှာ ကြှနျတျောတို့နတေယျ။ ပထမဦးစှာ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကရငျနဲ့ အဆကျအစပျရှိ တယျ။ မှနျနဲ့ အဆကျအစပျရှိတယျ။ ကခငျြနဲ့ အဆကျအစပျရှိတယျ။ အဲဒီမှာ ကြှနျတျောတို့ပွောနတေယျ။ ခငျဗြားတို့ တိုကျတာတိုကျ။ ဒါကတော့ ခငျဗြားတို့ သဘောနဲ့။ သဘောတရားအရ မကနြေပျလို့ တိုကျကွတာပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေဲ့လို့ ဗမာပွညျရဲ့ ရှရေ့ေးကို ခငျ ဗြားတို့ စဉျးစားပါ။ အဲဒီမှာ ကမနျတျောတို့က ပရိုပို့ဈလုပျတာက ဖကျဒရယျ စဈစဆနျ။ ပွညျထောငျစု စဈစတနျ။ ခှဲထှကျတာကို ကြှနျတျောတို့မကွိုကျဘူး။ ခှဲလညျးမထံကျသငျ့ဘူး။ အဲဒါကို ကြှနျတျောတို့ တှနျးခဲ့တယျ။ သကျသတှေေ အမြားကွီးရှီတယျ။ ဆို တော့ ဒီနှဈဖကျက တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျ စကားပွောရတော့မယျ့ အခွအေနရှေိတယျ။ မပွောဘူး၊ ဟိုရှောငျမယျ ဒီရှောငျ မယျ ဆိုရငျတော့ အရဈရှညျ သှားမှာပဲ။
မေး။ ။ အနျကယျ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ကွညျ့လိုကျရပါတယျ။ မွနျမာပွညျကို ငွိမျးခမျြးရေး ရစခေငျြပွီဆိုတာ။ လကျရှိမှာရော မွနျမာပွညျက ငွိမျးခမျြးရေး ရဖို့နီးပွီလား။ ငွိမျးခမျြးရေး ရောငျနီသနျးပွီလား။
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောက သနျးတယျလို့ မမွငျဘူးဗြ။ AA ပျေါလာတာကွညျ့ပါလား။ ငွိမျးခမျြးရေးက မသနျးဘူး။ စကား ပွောရ မယျ။ လကျနကျါကိုငျတဲ့ သူအခငျြးခငျြး စကားပွောရမယျ။ မငျးက ဒီလိုကှာ၊ ငါကဒီလိုကှာ။ ခငျ ဗြားတို့ကတော့ စဈသားစု ဆောငျး နတောပဲ။ ကြုပျတို့က ဘာလို့မစုရမှာလဲ။ အေး … မငျးတို့လညျး စုဆောငျး ငါတို့လညျး စုဆောငျးမယျ။ဒါပမေဲ့ ရှရေ့ေး ကရြငျ ဘယျလို လုပျမယျ ဆိုပွီးတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ လုပျရမှာ။ တပျမတျောက အငျအားအရှိဆုံး လကျနကျ ကိုငျ တာ။ သူက အလြှော့ပေးညှိနှိုငျးရမယျ။ သူက ပွော ရမယျ။ ဒါပမေဲ့ တပျမတျော ကိုယျတိုငျက ကနျ့လနျ့ကနျ့လနျ့ လုပျရငျတော့ ကနျြတဲ့ လူက လိုကျမှာ မဟုတျ ဘူးဗြ။ လကျနကျကိုငျတှကေိုး။ လကျနကျကိုငျမှာပဲ။ တပျမတျောက မငျးတို့က ဘာလုပျ သငျ့ တယျ။ ညာလုပျ သငျ့တယျပွောပွီး သူလုပျသငျ့တာကြ မလုပျဘူးဆိုရငျ ဘယျလကျခံမလဲ။
မေ။ ။ လကျရှိသှားနတေဲ့ နိုငျငံရေးဆှေးပှဲ စကားဝိုငျးတှကေရော ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဘယျလောကျ အတိုငျး အတာအထိ ထိရောကျမယျလို့ သုံးသပျလို့ရမလဲ။
ဖွေ။ ။ လုံးဝ မထိရောကျဘူးလို့တော့ မပွောခငျြဘူး။ တဈခြို့တှေ ပွောတယျ။ သနေတျဖောကျတာထကျ စာရငျ ဆှေးနှေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ သို့သျောလညျးပဲ လကျနကျကိုငျတဲ့ ဂရု ၂ခုက ကြှနျတျောတို့လို မဟုတျဘူးဗြ။ လကျနကျမကိုငျတဲ့ လူတှလေို မဟုတျဘူးဗြ။
မေး။ ။ ကွာဦးမယျ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဖွေ။ ။ ကွာတော့ ကွာနိုငျတယျ။ ကွာနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့လို့ ကွာတာက ကောငျးတာတော့ မဟုတျဘူးဗြ။ ဒီကွားထဲမှာ ပွဿ နာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။
မေး။ ။ အနျကယျ့အနနေဲ့ရော နိုငျငံရေးလောကထဲ ပွနျပွီးလှုပျရှားဖို့ရော အစီအစဉျရှိလား။
ဖွေ။ ။ တိုကျရိုကျကွီး ပါတီထောငျတာတို့၊ ဒီပွငျပါတီထဲ ဝငျတာတို့ အဲဒါမြိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ၉၀ ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျရသူ တှလေညျး သူတို့ဟာသူတို့ လုပျခငျြလုပျပေါ့။ ကြှနျတျောကတော့ မပါဘူး။ သို့သျောလညျးပဲ နိုငျငံရေးသမားဖွဈတဲ့အတှကျတော့ လြှောကျသှားနမှောပေါ့ဗြာ။ နိုငျငံရေးသမား ကိုယျ့အဖျောတှနေဲ့လညျး တှမှေ့ာပေါ့။ ပါးစပျကလညျး လြှောကျပွောမှာပေါ့ဗြာ။ အကွံပေးမယျပေါ့ဗြာ။ ယူခငျြယူ မယူခငျြနပေေါ့။ နိုငျငံရေးနဲ့ တိုကျရိုကျမဆိုငျဘူး။ လူမှုရေးတှေ ၊ဒါတှလေညျး လုပျခငျြတာပေါ့။
မေး။ ။ ပါတီနိုငျင့ရေးအပျေါမှာ စိတျကုနျသှားပွီလို့ ပွောလို့ရမလား။
ဖွေ။ ။ စိတျတော့ မကုနျဘူး။ ကြုပျက ဝေးနတေယျဗြ။ ခုမှ ဝငျမယျဆို မဝငျနဲ့ဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ။ နောကျဆယျနှဈစောငျ့ဦး၊ နောကျဆယျနှဈဆို ကြုပျက ခု ၇၅ နှဈကနေ ၈၅ နှဈဖွဈပွီ။ သဘောပွောပွတာပါ။
မေး။ ။ လာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျရော လုပျဖျောကိုငျဖကျ နိုငျငံရေးသမားတှနေဲ့ ပါတီတှကေို ဘာတှေ အကွံပေး ခငျြတာ ရှိမလဲ။
ဖွေ။ ။ ၂၀၂၀ ကတော့ သူ့တို့ဟာ သူတို့ လုပျသှားမှာပဲဗြ။ ပွညျသူလူထုကတော့ သခြော စဉျးစားပေါ့ဗြာ။ ပွညျသူလူထုလညျး စဉျးစားတတျတာပဲ။ ဘယျပါတီကို ထညျ့ရမယျ၊ ရှရေ့ေးက ဘယျလို ရှိသလဲ။ ဒီရှရေ့ေးကို ရငျဆိုငျဖို့ ဘယျသူတှေ လိုသလဲ။ ပွညျသူလူထုက ဆုံးဖွတျရမှာပေါ့။ သို့သျောလညျးပဲ ပါတီတှကေတော့ သိပျသိပျသညျးသညျးရှိဖို့ ပွညျသူလူထုအပျေါမှာ စတေ နာရှိဖို့ ၊နောကျပွီးတော့ လလေ့ာမှုတှကေတော့ လို တယျဗြာ။ မလလေ့ာရငျ မလလေ့ာတဲ့အဆငျ့မှာပဲ ကနျြခဲ့မှာ။
မေး။ ။ ၂၀၂၀ မှာ NLD ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍကိုရော ဘယျလို မွငျလဲ။ လကျရှိအခွအေနနေဲ့ဆို ၂၀၁၅ တုနျးကလို အနိုငျရနိုငျ ဦးမ လား။ သူတို့အပျေါ အမွငျမကွညျကွတာတှလေညျး ရှိနတေော့။
ဖွေ။ ။ အဲဒါ ဆိုးတယျဗြ။ ကြုပျက ပွောလိုကျရငျ NLD ကို ပငျးတယျလို့ ဖွဈဦးမယျ။ ပွောရတာ ခကျတယျဗြ။ တကယျပွော ရငျ တော့။ ပွဿနာအကွီးကွီးက ရှိနတေယျ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒနေဲ့ ဘယျပါတီမဆို ကနျ့လနျ့ကွီးတော့ ဖွဈနမှောပဲ။ အဲ ဒါကို မပွငျမခငျြး ကနျ့လနျ့ကွီး ဖွဈမှာပဲ။ NLD တကျလညျး ဆကျပွီး ကနျ့ လနျ့ ဖွဈဦးမှာပဲ။ NLD မတကျလို့ ဘယျပါတီ တကျ တကျ ကနျ့လနျ့ဖွဈမှာပဲ။ ဘယျလောကျကနျ့လနျ့ဖွဈမလဲ၊ ဘယျလောကျလုပျနိုငျမလဲ၊ ဘယျလောကျ အငျအားရှိမလဲ။ အငျအားကို အငျအားနဲ့ ပွိုငျရတာဗြ။ ရှငျးရှငျး ပွော ရငျ နှဈယောကျတဈပိုငျးနဲ့ ပွိုငျလို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ NLD ရဲ့ အခွခေံ အငျအား ဘယျ လောကျရှိလဲ။ ဒီဟာတှကေို စောငျ့ပွီး ကွညျ့ရမှာပဲ။
မေး။ ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ ဖွညျ့စှကျပွီး ပွောခငျြတာ ရှိသေးရငျလညျး ပွောပေးပါဦး။
ဖွေ။ ။ မရှိပါဘူးကှာ။ ဒါတှဟော တိုငျးပွညျတဈပွညျမှာ လူတှဟော မှနျမှနျကနျကနျ ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ မှနျမှနျကနျကနျ မရှိရငျ မလှယျဘူး။ ကိုယျ့တိုငျးပွညျ ကိုယျ့လူမြိုးကောငျးစားဖို့တော့ ကွညျ့ရမှာပေါ့။
ဟုတျကဲ့ပါ .. အခုလိုမြိုး ကြှနျတျောတို့ကို အခြိနျပေး ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ အနျကယျကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ …. ။
- တှဆေုံ့မေးမွနျးသူ - မြိုးသူအောငျငွိမျး
ချင်းပြည်နယ်က တောင်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးဖို့ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးနည်းတွေကိုဝေမျှပေး
ချင်းပြည်နယ်က တောင်သူတွေ ဝင်ငွေတိုးဖို့ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးနည်းတွေကိုဝေမျှပေးရင်း Hornbill Chin Coffee ကိုလည်း ကမ္ဘာကသိအောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့က Hornbill Chin Coffee ရဲ့ ပဲ့ကိုင် ရှင် ကိုမာဟု
မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းရောင်းဝယ်ရေးကုန်သည်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမင်းကိုဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဟာအရေးပါတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီး ပဲမျိုးစုံပြည်ပတင်ပို့တဲ့ဈေးကွက်ဟာလည်းတိုင်းပြည်အတွက်၊ တောင်သူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဈေးကွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Dec 29, 2018/0
ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ MPT Myanmar National League (U-21) 2018 အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ ဆောက်သမ်းမြန်မာအသင်း ကစားသမားလေး ဇော်ဝင်းနိုင်က(၁၈) ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးသွင်းအများဆုံးသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ MFF-MNL Awards night 2018 အခမ်းအနားမှာ သူ့အနေနဲ့ဂိုးသ